alpha, Author at Top MM News
alpha | August 14, 2020
Here are four steps you can take to begin the process of preparation for mediation Sometimes there are some stories where it is impossible to fall in love
Characteristics of people who areateacher in relationships Friends are just people. The only difference betweenafew andalot of friends. Some people are so
Reasons Why Most People Don’t Show Their Dark Side
Reasons Why Most People Don’t Show Their Dark Side Everyone hasadark side that they do not want to show. There are those who show the dark
What will change if you meditate for 10 minutesaday?
What will change if you meditate for 10 minutesaday? Many people know that meditation is beneficial. If you meditate for ten minutesaday, you will
Ginger tea can relieve colds and sore throats
Ginger tea can relieve colds and sore throats The weather is raining continuously, so I am worried about the rain. You should be careful as this weather is
The fastest way to cureabroken life
The fastest way to cureabroken life Everyone has hadaheart attack at least once in their life. Everyone who has ever hadaheart attack
သြစတြေးလျာနိုင်ငံက ပြည်တွင်း ဖြစ် EF 88 ရိုင်ဖယ် အလက် ၈၅၀၀ ဝယ်ယူ
alpha | July 15, 2020
သြစတြေးလျာနိုင်ငံက ပြည်တွင်း ဖြစ် EF 88 ရိုင်ဖယ် အလက် ၈၅၀၀ ဝယ်ယူ သြစတြေးလျ ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (ADF) ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန် သြစတြေးလျအစိုးရက EF 88 ရိုင်ဖယ် အလက် ၈၅၀၀ ဝယ်ယူမည်ဖြစ်သည်။ သြစတြေးလျနိုင်ငံလုပ် အဆိုပါရိုင်ဖယ်များကို သြစတြေးလျတပ်မတော်သို့ ရိုင်ဖယ်အလက် ၃၀၀၀၀ ပေး အပ်ရန်
ဟောင်ကောင်ကို အမေရိကန်က စီးပွားရေးဆိုင်ရာအထူးဦးစားပေးဆက် ဆံမှုရပ်ဆိုင်း
တရုတ်နိုင်ငံက အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ဟောင်ကောင်ဆိုင်ရာအက်ဥပဒေကို ဥပဒေအတွင်း ထည့်သွင်းမှု လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းအပေါ် ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက် တရုတ်နိုင်ငံက “ဟောင်ကောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအက်ဥပဒေ” ဟူ၍ ခေါ်ဆိုနေသည့် “ Hong Kong Autonomy Act” အား ဥပဒေအတွင်း ထည့်သွင်းရန် အမေရိကန်နိုင်ငံက လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ခြင်းအပေါ် ပြင်းထန်စွာ ရှုံ့ချကြောင်း နှင့် ခိုင်ခိုင်မာမာ ကန့်ကွက်ကြောင်း ကြေညာချက်တစ်စောင်ကို
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေး “ မိုဒါးနား” လူသားများနှင့် စမ်းသပ်ထိုးနှံမှု ရှေ့ပြေးရလဒ်ကောင်းများ ထွက်ပေါ်၊ ရောဂါပြီးကိုယ်ခံအားစံနစ် တုန့်ပြန်ပေးနိုင်ပြီး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဟု ဆို
ဆန္ဒအလျှောက်ပူးပေါင်းသူများနှင့် ကနဦး စမ်းသပ်ထိုးနှံမှု ရလာဒ်အဖြေအရ Moderna Inc. “ မိုဒါးနား အင့်ခ် “ ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်သည့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ဆေးမှာ လူသန်းပေါင်းများစွာကို ဖျားနာစေပြီး ၅၇၅,၀၀၀ ကျော်ကို အသက်ဆုံးရှုံးစေလျှက်ရှိသည့် ကူးစက်ကပ်ရောဂါအား အဆုံးသတ်စေနိုင်လိမ်မည်ဟု ကျွမ်းကျင်သူများက ခန့်မှန်းလျှက်ရှိကြောင်း South China Morning Post က
သမ္မတTrump မှ ဟောင်ကောင် အတွက် ဦး စားပေးဆက်ဆံမှု အဆုံးသတ်ရန် လက်မှတ်ထိုး
သမ္မတTrump မှ ဟောင်ကောင် အတွက် ဦး စားပေးဆက်ဆံမှု အဆုံးသတ်ရန် လက်မှတ်ထိုး အမေရိကန်သည်ဗြိတိသျှကိုလိုနီဟောင်းအတွက်လုံခြုံရေးဥပဒေသစ်ကိုပြဌာန်းပြီးနောက်ဟောင်ကောင်ကို ဦး စားပေးဆက်ဆံမှုကိုရပ်တန့်ရန်အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump လက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်။ ယခုအခါဟောင်ကောင်အားတရုတ်ပြည်မကြီးနှင့်တူညီစွာဆက်ဆံလိမ့်မည်။ဟောင်ကောင်ရှိအခွင့်အရေးများကိုနှိမ်နင်းသောတရုတ်အရာရှိများအားအရေးယူမှုများချမှတ်ရန်အတွက်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်ဥပဒေပြဌာန်းခဲ့သည်။ တရုတ်ကမူလက်တုန့်ပြန်အရေးယူမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ဟောင်ကောင်သည်ယခုအချိန်အထိတရုတ်ပြည်မကြီးတွင်မတွေ့ရသောထူးခြားသည့်လွတ်လပ်ခွင့်များကိုခံစားခဲ့ရသည်။သို့သော်နယ်မြေရှိလူအများစုကပေကျင်းမှချမှတ်ထားသောလုံခြုံရေးဥပဒေသစ်သည်ဟောင်ကောင်၏အထူးအဆင့်အတန်းကိုအဆုံးသတ်လိမ့်မည်ဟုစိုးရိမ်နေကြသည်။ ၁၉၈၄ ခုနှစ်တရုတ်နှင့်ယူကေအကြားသဘောတူညီချက်အရသဘောတူညီခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တရုတ်အစိုးရ၏ဝေဖန်မှုများကိုတားမြစ်ထားသည့်ဥပဒေသည်ဟောင်ကောင်၏နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းကို ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်ဗြိတိန်ကတရုတ်သို့ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ချိန် မှစ၍ အပြင်းထန်ဆုံးပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်။ အင်္ဂါနေ့ကနှင်းဆီဥယျာဉ်၌စကားပြောသောမစ္စတာ Trump